Jaadka iyo Ethiopian Airlines waa in ay Gudiga dawladu joojiyaa. | Gabiley News Online
Jaadka iyo Ethiopian Airlines waa in ay Gudiga dawladu joojiyaa.
March 28, 2020 - Written by admin
Sideedaba wax walba ka hortag ayey leeyihiin ee ka daba tag malaha. Sidaynu wada ognahayna wax faa,idooyina oo jaadka inaga soo gala oon khasaare caafimaad iyo mid dhaqaale ahayn ma jiro. Ethiopian Airlines, kana intan socdalakii aduunku kala xidhmay, waxaan 20taneeye qof oo laga shaki qabo inay xanuunka qabaan, ayuunbay soo qaada. Sidaa daraadeed waxa haboon intay xanuunka ina lasoo gali lahayeen in laynaga joojiyo duulimaadyada Ethiopian Airlines, inta duulimadyada aduunku dib u furmayaan. Jaadkana haddii hal qof oo iibinayaa qaado xanuunka, wuxuu qaadsiinayaa ugu yaraan dhowr boqol oo qof maalintii oo uu jaadka ka iibiyey, dhowrkaa boqol oo iyaguna kusii fikiraya bulshada iyo reerohoodii. Diiyara dadka soo raacaya ee ka imanaya waddanada xanuunka caabuqa COVID-19 ka dilaacay, waa inay joogan waddanada ay degen yihiin. Diiniyan Nabigeeni Mohamed (NNK), wuxuu yidhi haddii aad joogtan magaalo ama waddan xanuun ka dilaacay haka bixina, ama magaalo uu ka dilaacay ha galina ilaa inta uu ka dhamaanayo xanuunku. Dalalka reer galbeedkuna waxay bilaabeen inay xuduuda iyo safarada joojina ooy xidhaan qarnigii 14naad sida ku qoran (Baybalka booga Leviticus)
Xanibaadda dhaqdhaqaaqa dadka si looga hortago faafitaanka cudurka ayaa la isticmaali jiray kumanaan sano, muddo dheer ka hor inta aan la gaarin sababta cudurada faafa. Buugga Laawiyiintii ee Kitaabka Quduuska ah waxaa loola jeedaa xannibaadda baraska iyo erayga karantiilnimo ee ka soo baxda 40 maalmood oo loo adeegsado iskudayidda iyo ka hortagga faafitaanka Dhimashadii Madoowbay waxay ugu magac dareen, ee qarnigii 14aad. Maraakiibta ayaa sida caadiga ah loo karantiilay si looga hortago faafitaanka cudurada, oo ay ka mid tahay daacuunka.
Hadaba haddi Ilaahay inooma keeno xanuunka oo awood caafimaad, qalab, shaqaale khibrad u leh iyo mid dhaqaaleba inagoon haysan, hadana hal qof oo Somali land xanuunka la soo galaa intuu qaadsiinayo ayeynaan awoodinba. Qalabka ogsiyiiinta lagu neefsadana ma haysano, oo dadka uu xamuunka soo ritaa ma neefsan karaan qalabka neefsiga la,aanti. Tusaale ahaan, waxa ka dhacday Waddanka Koonfurta kuuriya, in qof dumara oo ay ugu magac dareen bukaan 31 oo ahayd qofkii 31naad ee xanuunka fayraska laga helo ay qaadsiisay 60% boqolkiiba dadka fayraska qaaday Waddanka koonfurta kuuriya.
Bukaanka 31, oo ah haweeney 61 sano jir ah, ayaa noqotay qofkii ugu horreeyay ee laga gaadhay xanuunka, dad ku cibaadaysta (kaniisadda Shincheonji Ciise) oo ku taala Daegu si loo tijaabiyo cudurka. Ma cadda halka ay ku qaadday fayraska. Qofkan, ayaa ah haweeney 61 jir ah, waxay ku dhacay shil gaari oo yar oo magaalada Daegu kaga dhacay, waxana agu qiyaasa dadka degen magalada in ka badan 2 milyan oo qof, waxayna tagtay dhakhtarka shilka Kadib, si ay u ogaato inay wax gadheen iyo inkale, taas oo wax nabara ama jabitaan ah laga waayey, balse inyar oo xumada laga helay kadibna ay diiday in aad loo sii baadho ooy tidhi waxba ma qabo oo waan iska tagaya. Lagamana baarin cudurka Coronavirus, maalmahii kadibna waxay laba jeer booqatay ooy kusoo cibaadaysatay Kaniisadda Shincheonji ee magaalada, siday Reuters soo werisay. Markiiba ka dib waxay billawday inay qandho yeelato iyo astaamihii fayraska, kadib dhakhtarka ayey tagtay ooy isbaadhay, jawaabtii may sugin ee intii jawaabtii soo baxaysay waxay sii waday howlaheedii caadiga ahaa, oo ay kujirto qado ay ku lahayd hudheel hudheel, halkaas ooy dad badan oo kale ku sii qaadsiisay. Laba maalmood qadodii kadib, Febraayo 17, waxaa la baaray oo ay ogaatay inay leedahay Covid-19, cudurka fayraska coronavirus. Lama oga sida ay ugu qaadday fayraska.
Maalmihii ku xigay, boqolaal ka mid ah dadkii ay kuwada cibaadaysanayeen kaniisada ayaa laga ogaaday inay qabaan caabuqa Covid-19. Waxa kale oo arin naxdin leh ku noqotay kiisas kale oo ay ka heleen dad badan oo degen degmo ka baxsan Daegu, oo saraakiisha caafimaadku waxay rumeysan yihiin inay ku xiran tahay adeegga aaska oo ay ka qeybgaleen xubno ka tirsan kaniisadda Shincheonji.
Labadan koox, ayay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay, “inay yihiin boqolkiiba 80% kiisaska dalka oo dhan.” Kuuriyada Koofurta ayaa in ka badan 8,000 xaaladood oo coronavirus ah iyo 75 qofna ay dhinteen.
Halkan waxaynu tusaale ugu qadanaynaa, qofka dumarka ah ee 61 jirka ah, siday kaligeed 100kii qofba ay 60 qof u qaadsiisay xanuunka fayraska COVID-19. Su,aashu waxay tahay haddii dhowr boqol oo qof qaadana imisa kun oo qof ayey usii gudbin karaan caabuqa Hargabka COVID-19.
Gudiga Maareynta ka hortaga caabuqa Hargabka COVID-19, waa inay qaabka ku haboon ka hortaga caabuqa ay sameeyan iyagoo kaashanaya dhakhatiir iyo khubaro.
Xarumaha daryeelka caafimaadku waa inay u diyaar garoobaan kordhinta tirada ee kiisaska looga shakisan yahay ee COVID ‑ 19. Xanuunkan goobo loogu talo galay, waa in lagu diyaariyaa sida loo maareeyo kiisaska Waxay qorsheyneysaa inay siiso sii wadida ganacsiga iyo bixinta daryeel caafimaad oo kale oo muhiim ah.